Wariye Ismaaciil Cabdulle Sabriye oo maanta lagu xiray magaalada Jowhar (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wariye Ismaaciil Cabdulle Sabriye oo maanta lagu xiray magaalada Jowhar (DHAGEYSO)
Ciidanka maamulka Hirshabeele ayaa maanta xabsiga u taxaabay wariye Ismaaciil Cabdulle Sabriye, oo teleefishinka Universal uga soo warami jiray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Wasiirka warfaafinta maamulka Hirshabeele Mahad Xasan Cismaan oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa ku eedeeyay wariye Ismaaciil Cabdulle Sabriye inuu warar been abuur ah ka faafiyay madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble, kaas oo ahaa inuu qaadacay ka qeyb-galka shirka London.
Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble uu ka qeyb-galayo shirka London, islamarkaana aanay jirin meel uu madaxweynuhu ku sheegay inaanu shirkaasi ka qeyb-gali doonin.
Wuxuu wasiirka ku eedeeyay wariyaha la xiray in dhowr jeer hore looga digay joojinta wararka been abuurka ah ee uu ka faafinayo maamulka Hirshabeele, balse uu dhagaha ka furreeystay.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta ka sheegay inuu qaadacay qorshaha horumarinta qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo lagu ansixinayo shirka London, balse uu shirkaas ka qeyb-gali doonno.